रित्तिँदै कर्णालीका आइसोलेसन- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
रित्तिँदै कर्णालीका आइसोलेसन
१ हजार ४ सय ८३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएकामा अहिले २ सय ९९ जना मात्र आइसोलेनमा छन्
असार १९, २०७७ कलेन्द्र सेजुवाल
सुर्खेत — कर्णालीमा कोरोना संक्रमितहरू निको भएर घर जाने क्रम बढेको छ । आइसोलेसनमा बसेका उनीहरूलाई लक्षणमुक्त भएका आधारमा पीसीआर परीक्षण नगरेरै पठाउन थालिएपछि आइसोलेसन रित्तिन थालेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा रहेको कोरोना विशेष अस्पताल । तस्बिर : कलेन्द्र सेजुवाल/कान्तिपुर
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबारसम्म १ हजार ४ सय ८३ जनामा संक्रमण देखिएकामा १ हजार १ सय ७८ जनालाई डिस्चार्ज गरिएको छ । अहिले २ सय ९९ जना मात्र विभिन्न जिल्लाका आइसोलेसनमा बसिरहेका स्वास्थ्य सेवा महाशाखा प्रमुख डा. लक्ष्मीनारायण तिवारीले बताए ।
जेठ ५ गते पहिलोपटक संक्रमण देखिएको कर्णालीमा जेठ २३ गते ७ जनालाई डिस्चार्ज गरिएको थियो । सुरुवातको केही समयसम्म पुनः स्वाब परीक्षण गरेर डिस्चार्ज गर्ने गरिए पनि अहिले आइसोलेसनमा बसेको समय र उनीहरूमा देखिएको लक्षणका आधारमा डिस्चार्ज गर्ने गरिएको कर्णाली प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्काले बताए । ‘सरकारले भर्ना भएको लामो समयसम्म लक्षण देखिएन भने डिस्चार्ज गर्न मिल्ने निर्देशन दिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले त्यही निर्देशनका आधारमा डिस्चार्ज गर्ने गरेका छौं ।’ संघको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जेठ २१ गते देशभरका कोरोना अस्पताललाई ‘नेसनल टेस्टिङ गाइडलाइन फर कोभिड–१९’ पठाई परीक्षणबिनै डिस्चार्ज गर्न सकिने बाटो खोलेको थियो ।
प्रदेश सरकारका अनुसार कर्णालीमा कोरोना संक्रमितका लागि कुल आइसोलेसन बेड संख्या १ हजार ६ सय १९ रहेको छ । परीक्षणबिनै घर पठाउने गरिएपछि आइसोलेसन बेडहरू खाली भएका छन् । २ सय बेड क्षमताको सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पतालको कोरोना विशेष अस्पतालमा अहिले ३६ जना संक्रमित छन् । तीमध्ये २ जना आईसीयू (सघन उपचार कक्ष) मा छन् भने अन्यको अवस्था सामान्य छ । डा. खड्काका अनुसार कर्णालीका अधिकांश कोरोना संक्रमितमा लक्षण देखिएको छैन । संक्रमितमध्ये ६ जनाको मृत्यु भए पनि कोरोनाकै कारण उनीहरूको मृत्यु भने भएको होइन ।
कर्णालीमा शुक्रबारसम्म २९ हजार ८ सय २६ पीसीआर परीक्षण भएको छ । सुर्खेतमा रहेको पीसीआर मेसिन बिग्रिएको छ भने अहिले जुम्ला, दैलेख र रुकुम पश्चिमको चौरजहारीबाट परीक्षण भइरहेको छ । सुर्खेतको प्रयोगशालामा संकलन भएका स्वाबको प्रोसेसिङ गरी नेपालगन्जस्थित प्रयोगशालामा पठाउने गरिएको प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशक रीता भण्डारीले बताइन् ।
संक्रमितहरू परीक्षणबिनै डिस्चार्ज भएपछि गाउँमा भने जोखिम बढेको छ । प्रदेश अस्पतालको आइसोलेसनबाट डिस्चार्ज भएर घर गएका एक संक्रमितले पीसीआर परीक्षण नहुँदा ढुक्क रहने अवस्था नभएको बताए । ‘गाउँका मान्छेले पनि शंका गर्दै दुर्व्यवहार गर्छन्,’ उनले भने, ‘मैले त सकभर सावधानी अपनाउने प्रयास गरेको छु, सँगै आएका अन्य केही व्यक्ति भने मज्जाले गाउँमा डुलिरहेका छन् ।’
क्वारेन्टाइन पनि रित्तिँदै
पछिल्लो समय भारतबाट आउने व्यक्तिको संख्या घट्दै गएपछि शैक्षिक संस्थामा बनाइएका क्वारेन्टाइन पनि खाली हुँदै गएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयले पछिल्लोपटक असार १२ गते गरेको अपडेटअनुसार ४३ हजार २ सय ५५ बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएकामा त्यहाँ ६ हजार ७ सय ६६ जना मात्र बसिरहेका छन् । ६२ हजार ४ सय ५३ जना क्वारेन्टाइनमा बसेर फर्किएका कार्यालयका उपसचिव हेमबहादुर रानाले बताए । उनका अनुसार लकडाउन सुरु भएयता कर्णालीमा भारतबाट ४८ हजार ११ जना र अन्य मुलुकबाट २ सय ७५ जना आएका थिए ।
संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सुर्खेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी लकडाउनमा कडाइ गरेको छ । कार्यालयले फलफूल, तरकारी, दूध, ग्यास, औषधि पसलजस्ता अत्यावश्यक सेवाबाहेकका पसल बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मात्र खुला गर्न निर्देशन गरेको छ । यी पसललाई साताको शनिबार बन्द गर्नसमेत निर्देशन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल रेग्मीले बताए । होटल, रेस्टुरेन्ट, खाजा नास्ता पसल, सैलुन र ब्युटीपार्लरलाई पूर्णरूपमा बन्द गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले समेत सुर्खेतसहित संक्रमण बढी देखिएका जिल्लामा लकडाउन कडा पार्ने निर्णय गरेको थियो । कर्णालीका तीन जिल्ला दैलेख, सुर्खेत र सल्यानमा संक्रमण बढी छ । शुक्रबारसम्म दैलेखमा ७ सय ७५, सुर्खेतमा ४ सय ५७ र सल्यानमा १ सय ९२ जनामा संक्रमण देखिएको छ । प्रकाशित : असार १९, २०७७ १९:५०
बाढीमा फसेकालाई उद्धार गर्न बाँके र बर्दियाका ७ स्थानमा हेलिप्याड निर्माण
प्रदेश सरकारले विपद्पूर्वको व्यवस्थापनका लागि पठाएको बजेटबाट हेलिप्याड निर्माण
बर्दिया — बाढी प्रभावित क्षेत्रमा जनधनको क्षति हुन नदिन बाँके र बर्दियाका स्थानीय तहले हेलिप्याड निर्माण गरेका छन् । बाढीमा फसेका सर्वसाधारणलाई हेलिकप्टर प्रयोग गरेर उद्धार गर्न हेलिप्याड निर्माण गरिएको हो । रात्रिकालीन अवस्थामा पनि हेलिकप्टर बस्न र उड्न सक्ने बनाइएको छ । प्रदेश सरकारले सबै पालिकामा हेलिप्याड बनाउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिए पनि बजेट कम भएको भन्दै अन्यत्र बन्न सकेको छैन ।
बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको फत्तेपुरमा हेलिप्याड निर्माणका लागि स्थलगत अध्ययन गर्दै सरकारी अधिकारीहरु । तस्बिर : ठाकुरसिंह थारु/कान्तिपुर
बाढीबाट अति प्रभावित बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाको नयाँबस्ती, राप्ती सोनारीको फत्तेपुर र डुडुवा गाउँपालिकामा हेलिप्याड बनाइएको छ । राप्ती नदीकै कारण दर्जनभन्दा बढी गाउँ कटान भएर विस्थापित भइसकेका छन् । ‘नरैनापुर र राप्ती सोनारीको फत्तेपुरमा हेलिप्याड बनाउने स्थान फाइनल भइसक्यो । डुडुवामा स्थान निश्चित गर्न बाँकी छ,’ बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङले भने । प्रदेश सरकारले विपद्पूर्व व्यवस्थापनका लागि बाँकेलाई १५ लाख बजेट पठाएको छ ।
यस्तै, बर्दियाको बाँसगढी, बारबर्दिया, राजापुर र गुलरिया नगरपालिकामा पनि हेलिप्याड बनाइएको छ । बबई नदीका कारण गुलरिया नगरपालिका र बारबर्दियाका दर्जनभन्दा बढी गाउँ विस्थापित हुँदै आएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारीले बाढी आउनुपूर्व नै कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको बताए । बर्दियाका लागि प्रदेश सरकारले विपद्पूर्वको व्यवस्थापनका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट पठाएको छ । हेलिप्याड निर्माणको काम नेपाली सेनाले गर्दै आएको छ ।
प्रकाशित : असार १९, २०७७ १९:४४